ထိုင်ပေမြို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားသစ်သီးသန့်ကဏ္ဍမြန်မာဘာသာ-နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း-111ခုနှစ်မြို့ပြရေးရာဗျူရိုနှင့်ထိုင်ပေသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကောလိပ်တို့မှ「ပြုစုစောင့်ရှောက်သူ-ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်အထူးတန်းခွဲ」ကိုပူးပေါင်း ကျင်းပခဲ့သည်၊ ပြေးစို့နော် ~ ပါဝင်ဖို့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်!!! (5-1)
111ခုနှစ်မြို့ပြရေးရာဗျူရိုနှင့်ထိုင်ပေသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကောလိပ်တို့မှ「ပြုစုစောင့်ရှောက်သူ-ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်အထူးတန်းခွဲ」ကိုပူးပေါင်း ကျင်းပခဲ့သည်၊ ပြေးစို့နော် ~ ပါဝင်ဖို့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်!!! (5-1)
111ခုနှစ်မြို့ပြရေးရာဗျူရိုနှင့်ထိုင်ပေသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကောလိပ်မှ 111ခုနှစ်7လ7ရက်မှ7လ25ရက်၊တနင်္လာမှသောကြာနေ့တိုင်းနံနက်8နာရီ30မှ17နာရီ05မိနစ်ထိ『ပြုစုစောင့်ရှောက်သူ-ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်အထူးတန်းခွဲ』ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်၊ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသစ်သူငယ်ချင်းများတက်ကြွစွာစာရင်းသွင်းရန်ကြိုဆိုပါသည်၊အသေး စိတ်အချက်အလက်များအတွက်ဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရှုပါ။
သတငျးအခကျြအလကျ update ကို：2022-05-06 18:50